I-Panthenol, i-Polyquaternium, i-Pvp Polymer, izithako zoKhathalelo lobuqu-i-Y & R.
I-Y & R, ibhaliswe kwiTianjin Free Trade Zone (FTZ), inkampani ihlelwe kwakhona ukusuka eKingchem International Ltd eyasekwa okokuqala ngo-2012.Sibandakanyeka kwimveliso kunye nokusasaza uluhlu olubanzi lweepotifoliyo, izinto ezingavunyelwanga, izongezo , abaphakathi kunye nezinyibilikisi kunyango lwehlabathi / ukhathalelo lomntu, amayeza, ukutya, i-H & I kunye namanye amashishini e-Hi-Tech.
Sisoloko sifuna i 'Mutural Trust & Ukwabelana, ukuBambisana kunye neziBonelelo', kwaye senza imizamo yethu yokuhambisa iimveliso ezizodwa, iinkonzo kumaqabane ethu.
Sijolise ekuveliseni nasekuboneleleni ngeeVithamini, i-PVP Polymers kunye nePyrrolidone esekwe kwisinyibilikisi / abaphakathi, i-PVM / MA Copolymers, i-Kojic Acid dipalmite njl
I-Y & R (YNR) ihlala izinikele ekuphumezeni isicwangciso sophuhliso olunokubakho, sigxile kulungelelwaniso lomntu kunye nendalo ngokuzama ukudala indlela ephucukileyo yokuphucula.
Impendulo kunye neNkonzo
I-Y & R, ibhaliswe eTianjin iZowuni yoRhwebo lwaSimahla ...
Inkampani ihlelwe ngokutsha ukusuka eKingchem International Ltd eyaqala ukuseta ngo-2012.
Uhlobo New Polyquaternium-11 Grandly La ...
Uhlobo olutsha lwePolyquaternium -11 olusungulwe kakhulu I-Polyquaternium-11 yokuthengisa ine-approx. 20% yomxholo oqinileyo onobunzima obuphezulu beemolekyuli. Ukuhlangabezana neemfuno zentengiso, sazisa iPolyquaternium-11 50%. I-Polyquaternium-11 yityuwa ye-quaternary ammonium yetyuwa eyenziwe kukusabela kwe-diethyl ...
UMSEBENZI OWODWA WOKUGQIBELA IDL-Panthenol Powder
Ngenyanga edlulileyo, intengo yesabelo se-DL-Panthenol Powder USP Grade yenziwa ngo-Sep.01,2020 ukuya kuSep. 30, 2020. Uya kufumana ingxelo ekhawulezileyo ngeenkcukacha xa sele uthumele naziphi na izicelo kuthi. I-DL-Panthenol sisixhobo esihle sokuthambisa, esine-powder powder emhlophe, enyibilikayo emanzini, utywala, ipropylene glycol. IDL-Panthen ...